Kismaayo News » “Ilma adeerayaalow Cali Raage hakaraacina Nabiga Ilaahey” WQ Adam Abuzuhri
“Ilma adeerayaalow Cali Raage hakaraacina Nabiga Ilaahey” WQ Adam Abuzuhri
Maadama aan ku cusbaa magaalada Nairobi iyo sida la’isu hayo ayaan saaxibkey oo igu martiqaadey muxaadaradan ayaan weydiyey waxa Cali Raagi soo galiyey qoladaan Sunada diidan? Anigoo weliba kudaray “Cali Raage, sow ninkii aan aqaaney ee wadaadka ahaa Ma’ahan?” ‘Waa isagii aad taqaaney oo wuxuu noqdey qoladaas!”
Mudadii aan wada joogney East Africa, ma aheyn nin kuxiran koox gooni ah walow uu ahaa mid ka agdhow xarakaatkii dhaq-dhaqaaqa hubaysan kawaday Somalia oo waxaa la arki jirey isagoo ku
labisan dharka afghaanistaanta qaataan oo leh ‘jihaadka ha la’aado!
Wixii talo iyo tusaalo ah abuzuhri1@gmail.com